မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂျင်းထည့်ခံရခြင်းအနုပညာ - Bees Media Myanmar
လူဆိုတာ က အစားအသောက်နေ့တိုင်း စားသောက်ကြရတဲ့ မျိုးနွယ်စု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတော့ အစားအစာလိုအပ်ချက်ဟာ လူဦးရေ တိုးပွားလာနဲ့အမျှ ကြီးထွားလာပါတယ်။ ဒီလိုကြီးထားလာတဲ့ဈေးကွက်ကိုအလျင်မီအောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် လူတွေဟာ နည်းလမ်းအသစ်တွေ၊ ကလိမ်ကကျစ်နည်းတွေကို ကြိုးစားလာကြပါတော့တယ်။
ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆေးဘဲဥလို့ခေါ်တဲ့ ဖီတန်ကို ရဖို့အတွက် တစ်လလောက် ရိုးရာနည်းအတိုင်းစိမ်ရတာဖြစ်ပေမယ့် တစ်လမစောင့်နိုင်တော့တာကြောင့် ဓာတုဆေးရည်တွေနဲ့ ဖြတ်လမ်းနည်းသုံးပြီး လုပ်လာကြပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့်ပဲ လူသားတွေဟာ ရောဂါဗရ ထူပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစားအသောက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်မှု အင်မတန်မှာ ပျက်ယွင်းနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ နေ့စဉ် မစည်ကားအပ်တဲ့နေရာ ဖြစ်တဲ့ ဆေးရုံနဲ့ သုဿန်မှာ လူတွေစည်းကားနေတော့တာပါပဲ။ အခုတင်ပြချင်တာကတော့ မြန်မာတွေ ဂျင်းထည့်ခံနေတယ်ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ပြောဆို အသိပေးလာခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ခေတ်ကိုက လဖက်ညွှန့်ဆိုပြီး ရာဘာရွက်အညွှန့်တွေ ကို ချဉ်ငံစပ်လုပ်မပုပ်ဆေးတွေထည့် ဆီစိမ်. ပုလင်းနဲ့ပိတ်ပြီး တံဆိပ်ကပ်လိုက်ရင် တစ်ဆယ်သား ၃၀၀တန်ရာဘာညွှန့်တွေက တပုလင်း ၆၀၀၀ တန်နာမည်ကြီး လက်ဖက်ညွှန့် တွေ ဖြစ်သွားတဲ့ ဂျင်းခေတ်. (လဖက်စစ် မစစ်ခွဲချင်ရင် Leave margin entire ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ခွဲရတယ် လဖက် ရွက်အစစ်ရဲ့ အနားသတ်က နှင်းဆီ ရွက်လို အထစ်အထစ်လေးတွေ ပါပြီး ရာဘာရွက်က အနားသတ် ပြောင်ချောနေတယ်. လဖက်ပင် ကိုယ်တိုင်စိုက်ခဲ့လို့ ကိုယ်တိုင်ခူးခဲ့လို့အကုန် သိနေပေမဲ့လဲ လက်ဖက်ဝယ်တယ်ဆိုတာမျိုးက ရှောက်ရွက်ဝယ်သလို တညွှန့်ချင်းကြည့်ပီးဝယ်လို့မှ မရတာဆိုတော့တရွက်ချင်း ဖြန့်မကြည့်နိုင်သရွေ့တော့ခံပေါ့ရှင်)
ခေတ်ကိုက ပုစွန် အသား ငါးဖယ်အသား တစက်လေးမှတောင်မပါပဲ ထမင်းတွေချည်း ချဉ်အောင်လုပ် ရေခဲမုန့် ဖာလူဒါတေမှာသုံးတဲ့ ပန်းရောင် ဆေးလေးဆိုးပြီး အတောင့်လိုက် ဖက်ရွက်တေနဲ့ ထုပ်လိုက်ရင် ပုစွန် ချဉ် ငဖယ်ချဉ်ဆိုပြီး ထမင်းအချဉ် အသိုးဆေးဆိုးတွေကို တထုပ် ၃၀၀၀ ဝယ်စားရတဲ့ ဂျင်းခေတ်…(လက်ရှိရောင်းချပေးနေတဲ့ ဈေးကွက်မှာ စစ်တာလေးတွေလည်းရှိတော့ရှိတယ် အင်မတန်နည်းပါးပါတယ်။)
ခေတ်ကိုက ကြွက်တွေ တီကောင်တွေ မြွေတွေ အကုန်ရောကြိတ်ပြီး ကြက်အူချောင်း ငဖယ်ချောင်း ဂဏန်းချောင်း ပုစွန်အသားချောင်းဆိုပြီး တရုတ်က Packing လှလှနဲ့သွင်းလာတာတွေကို ကိုးရီးယားအကင်ဆိုပြီး မက်မက်မောမော ကြွက်သား၊ မြွေသား၊ တီကောင်းသားတွေကို နေ့စဉ်ဈေးကြီါ်ပေးပြီး စားနေကြတဲ့ဂျင်းခေတ်..(ဒါတွေသိလို့ တစ်ခါတစ်လေ သွားရေယိုမတက်စားနေကြတဲ့ ကလေးမတွေမြင်ရင် ဖြန်း..ဖြန်း လုပ်ချင်မိတယ်)
ခေတ်ကိုက ပေါက်ဖော်ကြီး၊ တရုတ်ကြီးတို့ဖက်က ဇီးစေ့ ဇီးဆံတွေ ဈေးကောင်းပေးဝယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဇီးဆံတွေထဲ အဝေရာစေ့တွေ ရောပြီးဂျင်းထည့်လို့ စိတ်ငြိမ်ဆေးဖော်ရတဲ့ဇီးဆံက အဝေရာဆံတွေဖြစ်နေတော့ စိတ်ငြိမ်ဆေးက ဘာအာနိသင်မှမထက်လို့ ပေါက်ဖော်ကြီးတွေသိသွားကြပြီး ဇီးဆံ ဈေးကွက် ပျက်သွားရတဲ့ ဂျင်းခေတ်..ပိုက်ဆံရရင် ဘာမဆိုလုပ်နေကြတဲ့ခေတ်မှာ ငွေကို နတ်ဘုရားတစ်ပါးလို ကိုးကွယ်နေသရွေတော့ စစ်မှန်ခြင်းတွေနဲ့ နေ့တိုင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။
ခေတ်ကိုက ပဲဆီစစ်စစ်မှစားတာ အညာပဲဆီမှ စားတာ ဘာတံဆိပ်မှ စားတာ ဘယ်လိုထားထား မခဲတဲ့ ပဲဆီမှစားတာဆိုတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် စားအုန်းဆီ တစ်ပေပါထဲ အီလန်ဆပ်ပြာမှုန့် တရာတန်တထုပ်ဖောက်ထည့် တညအိပ် အငြိမ် စိမ်ထား. မနက်မှ ကုန်ဈေးတန်းမှာရောင်းတဲ့ တရုတ်ကသွင်းလာတဲ့ တဗူး ၁၃၅၀၀ တန် ပဲဆီ အနံ့လေးနည်းနည်း ထည့်လိုက်တာနဲ့ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေဖျော်ထည့်ထားတဲ့ တပိသာ ၁၆၅၀ တန် စားအုန်းဆီ တွေက ဆပ်ပြာမှူန့်တန်ခိုးနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ရင်တောင်မခဲတော့ ပဲဆီ စစ်စစ်ဆိုပြီး တပိသာ ၇၀၀၀ ပေးစားကြတဲ့ ဂျင်းခေတ်.
(မေမြို့မှာနေတုန်းက မန်းလေးထိဆင်း ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ မြေပဲတွေကို စက်ကဇလားကြီးနဲ့ အပေါ်ကကြိတ်ပြီး ဆီကန်ထဲ ကျလာတဲ့ ပဲဆီ မှ ပိသာခွက်ကြီးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ခပ်ပြီး မျက်စိရှေ့မှာ ကြိတ်တဲ့ ပဲဆီ စစ်စစ်မှ မန်းလေးထိ ဆင်းပြီး ဝယ်စားတာတို့ ဘာတို့ ဝံ့ကြွားခဲ့ဖူးတယ်. တကယ်တော့ သူတို့က နဂိုထဲက ဆီကန်ထဲမှာ စားအုန်းဆီ ၃ ပုံ၂ ပုံ ထည့်ပြီးသားဆိုတာ မသိခဲ့တော့ ဂျင်းတေထည့်ခံရတာဆွာလေ..)
ခေတ်ကိုက ငဇင်ရိုင်းလို ငါးရံ့လို ငါးမျိုးဝယ်ရင် အညှီတွေချွဲနေမှ လတ်တယ်ထင်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ခေါင်းလျော်တဲ့တရော်ရည် အချွဲတွေ လောင်းချနယ်ဖတ်ပြီး ပုပ်လို့ပွလာလို့ တပိသာ ၂၅၀၀လောက်ပဲတန်တဲ့ ငဇင်ရိုင်းတွေကို လတ်လွန်းလို့ အညှီတေချွဲစိုနေတာဆိုပြီး တပိသာ ၇၀၀၀ ပေးစားကြတဲ့ ဂျင်းခေတ်. နို့မလိုင် ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ အိမ်သာသုံးတစ်သျူးတွေကို နို့ထဲထည့်ကြိုပြီး ပျော့ဖတ်ဖတ်တစ်သျူးတွေကို နို့မလိုင်ဆိုပြီး တပွဲ ၃၀၀၀ ထိပေးစားနေရတဲ့ ဂျင်းခေတ်..
ပြောရမယ်ဆိုများကြီး များကြီးကျန်ပါသေးတယ်. ဒါတွေရှောင်မယ်ဆို ရှောင်ရင်း ရှောင်ရင်း စားဈာမရှိ ဖြစ်သွားကြမှာစိုးလို့….. ဈေးသည်တွေ ကုန်သည်တွေ ထမင်းအိုး တုတ်နဲ့ထိုးသလို ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ခုလောက်နဲ့ပဲ တော်သေးပါပြီ. … ဒါတွေ ဒါတွေ ရှိနေသေးသရွေ့ ဒါတွေ ဒီလိုတွေ စားနေရသရွေ့ ကင်ဆာ. နှလုံး. သွေးတိုး .ဆီးချို. ကျောက်ကပ်.သွိုင်းရွိုက်. ရောဂါတွေ ရောဂါတွေ ရှောင်လို့မရ ဖြစ်နေကြဦးမှာပါပဲ. ဒေါင်း လေးတွေလဲ မွေးလာကြဦးမှာပါပဲ. ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေလဲ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေကြဦးမှာပါပဲလေ။ အစားတစ်လုတ်နဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးကို အလဲအလှယ်မပြုလုပ်မိစေဖို့ သတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
Ryan reynolds voice acterအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Animationဇာတ်ကောင်တွေနဲ့တခြားဇာတ်ကောင်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ပုရိသတို့ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အလန်းစား T-Shirt ဒီဇိုင်းများ